မင်းလေးကို လွမ်းနေလို့: ကျော်ခွနည်း(၈)
Freedom ကို မြန်မာလို ပြင်ဆင်မှု ပြုပြီး ကျော်ခွကြပါစို့ .
ဒီနေ့တော့ မအားတဲ့ကြားထဲကနေ ကျွန်တော် ကြိုးစားပြီး တင်ပေး လိုက်ပါတယ် . လွယ်ပါတယ် . setting မှာကို မြန်မာလို ရေးထားတာပဲကို လွယ်တာပေါ့ အဟဟ . အောက်မှာ Freedom ကို တင်ထား ပေးပါတယ် . အရင်ဆုံး ဒေါင်းလိုက်ပါဦး . Freedom + Openvpn v1.6, v2.0.9, v2.1 ပေါင်းထည့်ထား ပေးပါတယ် . openvpn ကို version အဟောင်းကိုပါ ထည့်ပေးထားပါတယ် . လိုအပ်ရင် သုံးရတာ လွယ်ကူအောင်လို့ပါ . မြန်မာပြည်က freedom.net ကို ပိတ်ထားတယ်ထင်လို့ အိတ်သွန်ဖာမှောက် Download လုပ်ပြီး တင်ပေးလိုက်တာပါ .
ဒါလေးက လူတိုင်းအတွက် အရေးပါတော့ လုံးဝမသိသေးတဲ့ ညီ/ညီမများအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ် .
(၁) ရလာတဲ့ ဖိုင်ကို win rar နဲ့ ဖြေလိုက်ပါ . win rar မရှိသူများ ဒီမှာ Download လုပ်ယူပါ .. ဖိုင်ဖြေပြီးတာနဲ့ Download လုပ်လို့ရလာတဲ့ freedom နှင့် openvpn ကို install လုပ်ပါမယ် .
(၂) ပြီးတာနဲ့ freedom ကို run လိုက်ပါ . အောက်ပါအတိုင်း language ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် . အဲ့ဒီ့အထဲကမှ မြန်မာစာ ဆိုတာလေးကို double click နှိပ်လိုက်ပါ .
(၃) အဲ့မယ် ရေးထားတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေကို သေသေချာချာလိုက်ဖတ်လိုက်ပါ . လွယ်ပါတယ် . အဓိကက Account Information မှာ မိမိအပေါ်က လုပ်ခဲ့တဲ့ username နဲ့ password ကိုထည့်ပါ . Proxy Address နဲ့ proxy port ကို မှန်ကန်အောင်ဖြည့်ပါ .
Posted by လွမ်းဝေနိုင်(မြိုင်) at 12:00 AM